Bevohoka aho, iainako am-pahasambarana izany – Blaogin'i Voniary
Zava-dehibe ny fitandrovana ny fahasalamana eo amin’ny vehivavy bevohoka. Tsy latsa-danja amin’izany koa anefa ny fikolokoloana ny ao anaty satria misy fiantraikany amin’ny toe-pahasalamana sy ny toe-piainan’ny zaza ny toe-tsaina, toe-po àry toe-panahy nitondran’ny reny azy tao am-bohoka. Izany indrindra no nahatonga ahy hikarakara ity “Tafatafa Mahasoa” mitondra ny lohahevitra hoe: “Bevohoka aho, iainako am-pahasambarana izany”, izay hotanterahina ny Sabotsy 27 Martsa 2021 ho avy izao manomboka amin’ny 02 ora tolakandro ao amin’ny Restaurant Toko Telo Ambatomena.
Sarobidy ny vanim-potoana fitondrana vohoka eo amin’ny vehivavy
Fotoam-pahasoavana, fotoana mamy ny fitondrana vohoka. Noho izany, tokony ho hafaliana lavareny no iainana mandritra iny 10 volana iny. Ao ireo mahatsapa izany ary toa mandeha ho azy ny vanim-potoana fitondrana vohoka. Betsaka kosa anefa ireo tranga mety mahakizintina, mahasorena raha tsy hilaza fotsiny ny fiovana ara-batana sy ny onjam-pihetseham-po ateraky ny hôrmônina. Misy aza moa ireo vehivavy miatrika olana ivelany maro toy ny olana ara-pahasalamana, olana ara-bola, olana eo amin’ny mpivady, fandaozana sy ny maro hafa. Izany indrindra no hitondrana ity tafatafa ity mba hanampiana ireo reny mitondra vohoka.
Ireo zavatra ho hita ao anatin’ity tafatafa mahasoa ity
Hizara telo ny fotoana izay mivelatra mandritra ny adin’ny telo eo ho eo.
Tapany voalohany: Torohevitra ara-pahasalamana entin-drasazy Ratongaranto Voahangy, mpampivelona ao amin’ny C3M.
Hovaliany ao ireo fanontaniana maro manitikitika ny reny mitondra vohoka toy ny:
Inona no sakafo mampitombo zaza ao am-bohoka ?
Ahoana no fomba fatoriana rehefa bevohoka ?
Inona no tokony atao rehefa bevohoka mba tsy hahasaro-piterahana sy mampisokatra ny vozon’ny tranon-jaza
Tsy maintsy mididy ve rehefa miteraka amin’ny manaraka raha toa ka nodidina tamin’ny niteraka ny zaza teo aloha?
Ahoana ny fomba hanisana ny SA sy ny volana ?
Ahoana no atao raha misy tsiranoka mandeha (perte) mandritra ny fitondrana vohoka?
Inona no zavatra ilaina amin’ny fiterahana?
Afaka miotra na mikotrana ve ny bevohoka?
Tapany faharoa: Torohevitra momba ny toe-tsaina, toe-po ary toe-panahy tsara hananana rehefa mitondra vohoka entin’i Voniary.
Anisany hovelabelarina amin’izany ny :
Fiatrehana ny fiovana ara-batana sy ara-pihetseham-po
Fanalana ny tahotry ny fiterahana
Fahaizana mankafy ny fotoana ankehitriny
Fiatrehana ny vavan’ny olona
Fiatrehana ny olana manokana: afa-jaza taloha, vohoka tsy nirina, fiarahana mikorontana, nilaozam-bady sns
Fandraisana ny fady malagasy
Fierem-panahy (meditation) ho an’ny bevohoka
Tapany fahatelo: Fandraisana anjaran’ny mpanatrika amin’ny alalan’ny fanontaniana, fanamarihana, fijoroana vavolombelona sy ny sisa.
Hofaranana amin’ny tsaingoka sy goka izay homanin’ny Restaurant Toko Telo ny fotoana.
Fa iza moa i Voniary?
Mety maro no mametra-panontaniana hoe fa iza moa i Voniary no izay hitondra ireo torohevitra ara-tsaina sy ara-panahy ireo.
I Voniary dia tsy iza fa mpiblaogy mizara momba ny fampivoaran-tena sy ny maha-Malagasy nanomboka tamin’ny taona 2016. Tiako ny mizara maimaimpoana ireo torohevitra mahasoa mikasika ny toe-tsaina mpandresy sy ny fijery miabo satria ny fivelaran’ny isam-batan’olona no antoky ny fandrosoan’ny firenena ary manomboka amin’ny fiovan’ny toe-tsaina izany. Ny ahy dia tsotra ny foto-kevitro: ianao ihany no vahaolana voalohany.
Namoaka ny boky “Raiso an-tànana ny fiainanao” aho tamin’ny volana Mey 2020 mba hanampiana ny olona hanana fijery miabo tao anatin’ny fihibohana. Natao endrika PDF izy io mba hahazoan’ny maro azy amin’ny fomba tsotra sy haingana. Ny volana Desambra 2021 dia navoaka ny boky taratasy niaraka tamin’ny kahie Mpandresy. Ny anton’izany dia voafetra ihany ny olona manana fahafahana mitsidika ny blaogy sy mamaky boky PDF. Ao koa moa ireo tsy mahita tsirony raha tsy manana ny boky taratasy eo an-tànana ka omena fahafaham-po izy ireo.
Ankehitriny, maniry hivelatra kokoa ny tenako eo amin’ny fanapariahana ireo torohevitra mahasoa izay notovozina avy any anaty boky, fampianarana, horonantsary isan-karazany sy avy amin’ny traikefam-piainako. Izany no nanosika ahy hamorona ny tafatafa mahasoa izay ihaonana mivantana aminareo ary itondrana lohahevitra iray. Natomboka amin’ny lohahevitra “Bevohoka aho, iainako am-pahasambarana izany” satria reny aho ary mitondra am-bohoka ny zanako fahatelo amin’izao fotoana izao. Satriko ny hizara ny traikefam-piainako sy hitondra torohevitra momba ny toe-po, toe-tsaina ary toe-panahy tokony hananana rehefa mitondra vohoka mba hanasoa ny hafa.
Hanatrika ny tafatafa mahasoa
Ilaina ny misoratra anarana mialoha satria voafetra ny toerana.
Manasa anao izay liana àry
handefa hafatra amin’ny pejy Blaogin’i Voniary na hiantso ny laharana 034 30 654 10
handoa ny saram-pidirana 12 000 Ar ao amin’ny Mvola na ao amin’ny Restaurant Toko Telo
Isaorana manokana etoana ny Restaurant Toko Telo izay mandray ny hetsika ary ny pejy Torohevitra Ho An’ny Reny izay miara-misalahy amin’ny fikarakarana.
Mandrapihaona àry e!
bevohoka, fahasalaman'ny vehivavy bevohoka, fahasambarana, mitondra vohoka, vehivavy malagasy